Quote လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
24-12-2007, 05:04 PM
Quoteလုပ်ခြင်းဟာ ကျနော်တို့ စကားပြောနေရင် တစ်ခြားလူရဲ့စကားကို ရည်ညွန်းချင်ရင် သုံးချင်းဖြစ်ပါတယ်.....
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ မလိုအပ်ပဲ ကုတ်လုပ်ခြင်း၊ အများကြီးကို ကုတ်လုပ်ခြင်း ဒါတွေဟာ ဖိုရမ်ရဲ့ စာမျက်နှာကို ဖောင်းဖွစေပါတယ်....ဖတ်ရတဲ့လူအတွက်လဲ အဆင်မပြေစေပါဘူး.....ဒါကြောင့် ကုတ်လုပ်ရင် အောက်က ၂ချက်ကို နည်းနည်းသတိထားကြပေးကြပါခင်ဗျာ.....
၁.ကုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ရည်ညွှန်းချင်တဲ့ ပိုစ့်ကအပေါ်လေးတင်ပဲ ရှိနေရင် ကုတ်မလုပ်ပါနဲ့ စာဖတ်သူတွေက သူ့အလိုလို ဆက်စပ်စပ်ဖတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂. အကယ်လို့ ကိုယ်ကုတ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာက ဝေးနေပြီဆိုရင်တော့ ကုတ်လုပ်ပါ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရည်ညွှန်းချင်တဲ့ဟာလေးပဲ ကုတ်လုပ်ပေးပါ ဒါဆိုစာမျက်နှာ ဖောင်းဖွမှုကို လျော့နည်းသွားစေပါမယ်.....
ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖိုရမ်လေးကို ကူညီစောင့်ရှောက်ကြပါခင်ဗျာ....ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အားလုံးကို.....
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုမိန်နွယ်, ကိုရဲလင်းထွန်း, ကိုသဝေထိုး, ဆန်းမောင်, ဆရာဖြိုး, လွင်မောင်အေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အမောင်, ဧရာဝတီ, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, g00gle, layatecho, Myo Min Zaw, phyulayswe07, smlat88, Starfire, thureinsoe, tu tu, zin min aung, zo
24-12-2007, 05:09 PM
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Jul 2007
တည်နေရာ: ခေတ္တ ထိုင်း
ပို့စ် 500 ခုအတွက် 836 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အတတ်နှိင်ဆုံး ဆင်ခြင်သွားပါမယ်လို့ ဂတိပြုပါတယ် ညီလေးရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ညီထွဋ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, smlat88, zo
Visit ညီထွဋ်'s homepage!
Find More Posts by ညီထွဋ်
24-12-2007, 05:14 PM
ပို့စ် 253 ခုအတွက် 863 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုဂျစ်တူးရေ...အခုလိုလေးပြောပြပေးတာ ...နောက်ကိုသေချာဂရုစိုက်ပါမယ် .....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကမ်းသာယာ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit ကမ်းသာယာ's homepage!
Find More Posts by ကမ်းသာယာ
27-01-2008, 10:38 AM
ပို့စ် 312 ခုအတွက် 704 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Quote လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဟိန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဟိန်း
27-01-2008, 11:07 AM
ပို့စ် 17 ခုအတွက် 24 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ဖြိုးငယ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဖြိုးငယ်
27-01-2008, 12:04 PM
ပို့စ် 103 ခုအတွက် 166 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အခုလို့ ပြောပြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ..
ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ :4::4::4:
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ပါပါး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ပါပါး
14-02-2008, 08:11 PM
ပို့စ် 120 ခုအတွက် 205 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ညီက အသင်းဝင်သစ် ဆိုတော့သိသင့်တယ်လေ
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မင်းထက်ဇဏ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by မင်းထက်ဇဏ်
11-05-2008, 01:19 PM
ပို့စ် 306 ခုအတွက် 838 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နောက်ဆို လိုအပ်မှပဲ ကုတ်လုပ်ပါ့မယ်။
မလိုအပ်တာတွေကို မလုပ်မိအောင် ဂရုစိုက်ရင်းနဲ့ ဖိုရမ်လေးကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပါ့မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ပိုးပိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ပိုးပိုး
11-05-2008, 01:57 PM
ပို့စ် 21 ခုအတွက် 45 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နောက်ဆိုရင် မလိုအပ်တာတွေ ကို မလုပ်မိအောင် ဂရုစိုက်ရင်း
[COLOR="Red"][SIZE="6"]ဓါးတွေကတောင်တန်းလောက် များတယ်. မီးတွေကပင်လယ်လောက် ကျယ်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓါးတောင် နဲ့ မီးပင်လယ် ကို ငါကျော်ဖြတ်မယ်။ ။[/SIZE][/COLOR]:10:
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ koko01 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by koko01
အခုလို ဖိုရမ်လေးကို ၀ိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်မယ်လို့ သိရလို့ အင်မတန်မှ ၀မ်းသာပါတယ်။ ဖိုရမ်မှာ ညီအကိုမောင်နှမတွေ ကူညီတာ ဖိုရမ်လေး တိုးတက်ရာမှာ အင်မတန်မှ အရေးပါလှပါတယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာမိသားစုကြီးကို ပိုမိုတိုးတက်အောင် အမြဲကြိုးစားကြရအောင်...
Last edited by ဂျစ်တူး; 11-05-2008 at 06:29 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
15-05-2008, 11:20 AM
ပို့စ် 448 ခုအတွက် 1,310 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ နယ်သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by နယ်သူ
18-05-2008, 12:00 PM
မမရာ.. စေတနာလွန်တဲ့ အမှားတွေပါ မောင်နှမတွေက နားလည်ကြပါတယ်.. မမစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့.. နော်..
13-07-2008, 10:46 AM
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 17 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုဂျစ်ရေ.. ကျနော်လည်း တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ဒီဖို ရမ်လေးကို စောက်ရှောက်ပေးပါ့မယ်ဗျာ ...
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ win zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
win zaw ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by win zaw
18-04-2009, 04:54 PM
ပို့စ် 41 ခုအတွက် 166 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့အကို စည်းကမ်းများကိုလိုက်နာလျက် ဖိုရမ် အကျိုးကို သယ်ပိုးပါမယ်အကို...
ရန်သူကိုခွင့်လွတ်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော ခံယူချက်ကတော့ အကြင်နာတရားပါပဲ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ cherry အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 09:12 AM